Indlela yokubala imisebenzi yeTrigonometry usebenzisa nayiphi na isangqa
NguMary Jane Sterling
Xa umisela amaxabiso omsebenzi we-trig yeengile ezibotshwe kwindawo esemgangathweni kwisangqa esikumazantsi aso, awunyanzelekanga ukuba ube nesangqa secandelo ukubala uququzelelo. Ungasebenzisa isangqa nangayo nayiphi na irediyasi, ukuba nje iziko likho kwimvelaphi.
Sebenzisa ii-angles kumfanekiso owandulelayo, unokulandela la manyathelo ukufumana i-sine ye-angle α:
1. Fumana i x- kunye no-y-uququzelelo lwendawo apho icala lesiphelo le-engile linqamleza khona nesangqa.
i-acetaminophen 325mg phenylephrine hcl 5mg
Unxibelelaniso zezi x = –5 kunye y = 12.
2. Misela i-radius yesangqa.
Ukulingana kwesangqa kunye neziko laso ekuqaleni x Mbini+ Y Mbini= r Mbini. Ukutshintsha i x kwaye Y kweli nxaki no -5 no-12, ngokulandelelana, ufumana (–5)Mbini+ (12)Mbini= 25 + 144 = 169 = r Mbini. Ingcambu ka-169 ingu-13, ngoko ke irediyasi yi-13.
3. Chonga umyinge womsebenzi uze ubeke endaweni yamaxabiso.
Emva koko, usebenzisa ii-angles kulo mzobo, fumana i-cotangent ye-angle β.
Fumana i-x- kunye no-y-uququzelelo lwendawo apho icala lesiphelo le-engile linqumla kwisangqa.
Unxibelelaniso zezi x = -12 kunye Y = -5.
Umsebenzi wecotangent usebenzisa kuphela x -Kwaye Y -Ukulungelelanisa, ke awudingi ukusombulula irediyo.
Chonga umyinge womsebenzi kwaye ubeke amaxabiso endaweni yawo.
Ngoku, usebenzisa ii-angles kumfanekiso owandulelayo, fumana i-secant ye-angle γ.
1. Fumana i x -Kwaye Y -lungelelanisa indawo apho icala lesiphelo leengile linqumla kwisangqa.
Unxibelelaniso zezi x = 0 Kunye Y = -13.
Misela i-radius yesangqa.
Ukusuka kumzekelo wokuqala, irediyasi yi-13.
Chonga umyinge womsebenzi kwaye ungene endaweni yamaxabiso.
Lo mlinganiselo awuchazwanga, nto leyo ethetha ukuba i-engile γ ayinasec sec.
Ngaba i-zoloft iyanceda ngonxunguphalo
fd & c ebomvu 40
ukususwa cyst sebaceous aftercare
isetyenziselwa ntoni i-losartan
yintoni imowudi yokulala kwi-iphone